ISIKHUMBUZO SOMTSHATO KABEHATI PRINSLOO SIKA-ADAM LEVINE: YABONA - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Amanqaku eBehati Prinsloo Amanqaku oMtshato woNyaka oMithathu ngeRide okanye ngeAdam Adam Levine
Amanqaku eBehati Prinsloo Amanqaku oMtshato woNyaka oMithathu ngeRide okanye ngeAdam Adam Levine
Imodeli yaseVictoria eyimfihlo yayinomyalezo omnandi wokukhumbula umtshato kumyeni wakhe uAdam Levine-jonga apha. (Shutterstock.com)
Ngu: Esther Lee Ngo-07/20/2017 ngo-10: 30 AM
UnguShukela wakhe kwaye uyakhwela okanye afe. Supermodel UBehati Prinsloo uthathe i-Instagram ngoLwesithathu, nge-19 kaJulayi, ukuthumela umyalezo omnandi ophawula isikhumbuzo sakhe somtshato wesithathu UAdam Levine .
U-Prinsloo, oneminyaka engama-28 ubudala, wabelana ngomfanekiso omnyama nomhlophe wakhe esenza ubuso obungenangqondo kwi-frontman yaseMaroon 5. Ukukhwela kwam okanye ukufa, ubuhle obuzelwe eNamibia buchaza umfanekiso. Iminyaka emi-3 yomelele.
Ukukhwela kwam okanye ukufa, iminyaka emi-3 yomelele ❤️
Iposi ekwabelwana ngalo nguBehati Prinsloo Levine (@behatiprinsloo) ngoJulayi 19, 2017 e9: 35 am PDT
Esi sibini saya kwindawo yomtshato ngoJulayi 2014, sitshata kwiFlora Farms eLos Cabos, eMexico. Abacwangcisi UYifat Oren kwaye uStefanie Cove wayecwangcise kwaye wavelisa umtshato waselunxwemeni, ngelixa umdlali weqonga uJona Hill (umhlobo wobuntwana womyeni) eqhuba umsitho. Uluhlu lweendwendwe ngokukhumbula lubandakanya uluhlu lwee-A ezininzi, kubandakanya uRobert Downey Jr., kunye nenqwaba yeemodeli ezinje ngo-Erin Heatherton, Coco Rocha noCandice Swanepoel.
Kwiinyanga ezininzi kamva, u-Levine wema ngakwindawo Umboniso kaEllen DeGeneres ukubhengeza uthando ngomfazi wakhe. Khange ndicinge ukuba ndiyayithanda. I-trippy kakhulu. Ndingumntwana. Kwenzeka njani oku? yatsho imvumi. Ndisebenzisa eli gama [umfazi] ngoku kakhulu. Nditsho ngaphandle kwesizathu. Ndiyithetha kakhulu… ‘Umfazi womfazi,’ ndiyayithanda. Nditsho nditshintshe inombolo yakhe efowunini yam ndathi 'Umfazi.'
UAdam Levine, uBehati Prinsloo kunye nentombi yabo uDusty Rose kwitheko lakhe laseHollywood Walk of Fame ngoFebruwari 2017. (Shutterstock.com)
Bobabini ngoku bangabazali kwintombazana entle eneenyanga ezili-10 egama linguDusty Rose. Esi sibini saqala esidlangalaleni ukuba sincinci ngoFebruwari kwimvumi yeHollywood Walk of Fame Umnyhadala weNkwenkwezi.
uhambo olukhulu kwimvula
iindawo zomtshato barn e-england entsha
izithembiso zomtshato kuye ezihlekisayo
iingoma zelizwe zabafazi abaza kutshata ukuhamba ezantsi
Izinto zothando zokwenza kwi-indianapolis
Eyona ndlela yokucoca amabala